Imaaraadka oo Markab sida Shixnad Gargaar u soo dirtay Somalia. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Imaaraadka oo Markab sida Shixnad Gargaar u soo dirtay Somalia.
Wargeyska The National ee ka soo baxa Dubai ayaa manta qoray in Markab sida 4,259 Tn oo Gargaar Cunto ah ka soo shiraacday dalkaasi, kun soo wajahn yahay Dekedda magaalladda Berbera ee W/Galbeed ee Somalia.
Markabkaasi waxaa ku raran Shixnd lagu qiimeeyey 10,3 million oo Dirhamka Imaaraadka, oo ka kooban 3.819 tan oo cunto ag, 356 tan oo Biyo nadiif, 23 Tan oo Tendho iyo Joodariyal ah iyo 51 Tan oo ka kooban dhar, Bustyaal iyo Qalabka Cafimaadka Carruurta.
Shixndaasi waxaa laga dejin doonaa Dekedda Berbera, si loogu taageero dadka ku soo barakacay Macluusha ka jirta Somalia.
Markabkaasi ayaa la sheegay inuu Dekedda Berbera ku soo xiran doono bilowga bisha soo socota ee May.
Wakaalladda Wararka Imaaraadka ee WAM ayaa sheegtay inay Hoggaanka Dowladda Imaaraadka bixiyeen Amarka Deeqdaasi, taasi oo qeyb ka ah Ololaha Kaalmo-ururinta ee dadka ku nool dalkaasi ugu soo yabooheen dadka ku macluulsan Somalia.
QM waxay ku qiyaastay inay 6.2 million oo qof oo omali ah u baahan yihiin Gargaar Cunto, iyado okala bar Tiradaasi u baahan yihiin Gargaar degdeg oo Naf-badbaadin ah.
Turkiga oo lagu xiray kun qof oo lala xiriirinayo Fatxullaahi Gulen
9 Diplomaasi oo Maraykan ah oo ka digay saamaynta haddii la jaro Kharajka QM iyo Samafalka Caalamiga.